उपसभामुख तुम्बाहाम्फेद्वारा राजिनामा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयनका लागि १२ गते निर्वाचन हुने, | Prabhavkari News
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेद्वारा राजिनामा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयनका लागि १२ गते निर्वाचन हुने,
काठमाडौं : उपसभामुख शिबमाया तुम्बाहाम्फेले राजिनामा दिए संगै अब प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयनका बाटो खुलेको छ | भने सभामुखका लागि १२ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुखको भूमिकामा रहेका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले १२ गते सभामुखको निर्वाचन तोकेका हुन् । लगतै संसद सचिवालयले सभामुख निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
सभामुखको उम्मेदवारी दर्ताको समय भने भोलि मंगलबार ७ विहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म तोकिएको छ । संसद सचिवालयकै महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १५ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी हुन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेकपाले नै शिवमायालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो ।
राजसत्ताभन्दा पितृसत्ता बलियो रहेछ: शिवमाया तुम्बाहाम्फे
निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजसत्ताभन्दा पितृसत्ता बलियो रहेको अनुभव आफूले गरेको बताएकी छन् ।
उनले राजसत्ता भनेर राजसंस्था लाई इंकित गरेकी हुन । ‘राजसंस्था सबै मिलेर सहजै फाल्यौं । तर, पितृसत्ताको सोचलाई परिवर्तन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ,’ उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. तुम्बाहाङफेले भनिन् ।
संस्था गत रुपले अगाडि बढेकाले पितृसत्ता सोचलाई उन्मुलन गर्न एक दुई व्यक्ति मात्रै लागेर नहुने भन्दै उनले पत्रकारलाई पनि यसतर्फ कलम चलाउन आग्रह गरिन् ।